အသကျ၂၀ ကြျော လာပွီဆိုတာနဲ့ တခြို့ကလညျး ဘှဲ့ရ၊တခြို့ကလညျး၊ လုပျငနျးခှငျတှဝေငျနကွေပါပွီ။
ဘှဲ့ရတဲ့ လူငယျတှေ အတှကျကလညျး ဘဝရဲ့အခြိုးကှတေ့ဈခုလိုပါပဲ။ ဘှဲ့ရပွီးတာနဲ့ ကိုယျရဲ့ အသကျမှေးဝမျးကွောငျးအလုပျကို ကိုယျကိုယျတိုငျရှေးခကြွရတော့မှာဖွဈပါတယျ။ ဘယျလုပျငနျးခှငျကိုပဲဝငျဝငျ လူငယျတှေ အနနေဲ့ မဖွဈမနရှေိသငျ့တဲ့ အရညျအခငျြး အခြို့ကိုဖျောပွပေးခငျြပါတယျ.....
ကိုယျမသိတဲ့ သူစိမျးတှနေဲ့ မိတျဆှအေပေါငျးအသငျးဖှဲ့ရတယျဆိုတာ မလှယျလှပါဘူး။ လူတျောတျောမြားမြား တှနျ့ဆုတျတတျကွပါတယျ။
ဒါပမေဲ့ မိတျဆှအေပေါငျးအသငျးဖှဲ့ခွငျးဆိုတာဟာ အောငျမွငျတဲ့သူတဈယောကျ ဖွဈစတေဲ့ အရညျအခငျြးထဲ ပါနပေါတယျ။
ဒါကွောငျ့ သူမြားနဲ့မတူ အောငျမွငျခငျြတယျဆိုရငျ ကွောကျရှံ့နတေဲ့ လူမြားစုထဲ ကိုယျမပါပါစနေဲ့တော့။
ဘယျလိုကွိုးစားရမလဲ – အခုခြိနျကစပွီး ဖွဈနိုငျသမြှ လူအားလုံးနဲ့ အပေါငျးအသငျးဖှဲ့ပါ။ အပေါငျးအသငျးမြားလာသလောကျ အခှငျ့အလမျးတှလေညျး ပိုမြားလာပွီး မကျြစိ၊ နား ပိုပှငျ့လာပါလိမျ့မယျ။
(၂) Presentation skills
လူအမြားရှမှေ့ာ စကားပွောရဖို့ကို လူအမြားစု ကွောကျရှံ့တတျကွပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ အောငျမွငျနတေဲ့သူတှကေတော့ ဘယျတော့မှ မကွောကျရှံ့ပါဘူး။
သူတို့ပေးခငျြတဲ့ မကျဆခြေျ့ သူတို့မြှဝခေငျြတဲ့ အကွောငျးအရာတှကေို အကွောကျတရားမရှိ တညျတညျငွိမျငွိမျ presentation လုပျနိုငျကွပါတယျ။
လူအမြားရှေ့ စကားရဲရဲပွောရဲတာဟာ sales ရောငျးတဲ့အခါမှာပဲဖွဈဖွဈ၊ ကိုယျ့ရဲ့အသကျမှေးဝမျးကွောငျးတိုးတကျမှုအတှကျပဲဖွဈဖွဈ၊ မီတငျမှာပဲဖွဈဖွဈ အထောကျအကူဖွဈစပေါတယျ။
ပွောရဲအောငျ ဘယျလိုလကေ့ငျြ့မလဲ – ကဲအခုခြိနျကစပွီး လူတှရှေမှေ့ာ မြားမြားလကေ့ငျြ့ပါ။ အိမျမှာဆို မှနျကွညျ့ရငျး စကားပွောလကေ့ငျြ့ပါ။
ကိုယျ့မကျြနှာကို မှနျထဲမွငျနရေတာမို့ ကိုယျ့ကို သူမြားက ကွညျ့နသေလိုခံစားရတော့ လူတှအေမြားကွီးရှရေ့ောကျလညျး တညျတညျငွိမျငွိမျ ပွောနိုငျပါလိမျ့မယျ။
ကွောကျစိတျကို ကြျောလှားဖို့အကောငျးဆုံးနညျးလမျးက ကိုယျကွောကျတဲ့အရာတှကေို ပုံမှနျထကျ (၂) ဆ ပိုလကေ့ငျြ့ပေးခွငျးပါပဲ။
(၃) Business Writing
အခုခတျေမှာ စီးပှားရေးလုပျငနျး တဈခုနဲ့ တဈခုပဲဖွဈဖွဈ ဋ်ဌာနအခငျြးခငျြးပဲဖွဈဖွဈ အီးမေးလျပို့တဲ့အခါ အင်ျဂလိပျလိုပဲ ပို့ကွတာမို့ စီးပှားရေးသုံး အင်ျဂလိပျစာဟာလညျး တတျထားသငျ့တဲ့ အရညျအခငျြးတဈခုထဲမှာ ပါဝငျနပေါတယျ။
ကိုယျက အီးမေးလျကို ခကျြကလြကျကြ ပို့တတျခွငျးဟာလညျး အောငျမွငျတဲ့ သူတဈယောကျမှာရှိသငျ့တဲ့ အရညျအခငျြးပါပဲ။
ဘယျလိုအရေးကငျြ့မလဲ – ဒါကတြော့ အင်ျဂလိပျစာလလေ့ာတာနဲ့ နညျးနညျးဆိုငျသှားပါပွီ။ လုပျငနျးခှငျထဲ ရောကျနပွေီဆိုရငျ ကိုယျ့လုပျငနျးအတှကျ သငျ့လြျောမယျ့ အင်ျဂလိပျစာ ရေးသားနညျး၊
အီးမေးလျကို ပရျောဖကျရှငျနယျလျကကြသြုံးနညျး စတာတှကေိုလညျး စနဈတကြ လလေ့ာထားဖို့ လိုလာပါပွီ။ ဒီလိုလလေ့ာတဲ့အခါ လုပျငနျးခှငျသုံး အရေးအသားတှကေို
သီးသနျ့သငျကွားပေးတဲ့ သငျတနျးတှရှေိသလို ကိုယျတိုငျလညျး လလေ့ာလို့ရပါတယျ။
(၄) Communication ပေါငျးသငျးဆကျဆံတတျခွငျး)
ကိုယျ့အဖှဲ့သားတှနေဲ့ Communicate (ပွောဆိုဆကျဆံ) တဲ့အခါမှာ မှနျကနျတဲ့နညျးလမျးနဲ့ ပွောတတျဖို့ကလညျး ခေါငျးဆောငျကောငျးတဈယောကျမှာ ရှိသငျ့တဲ့အရညျအခငျြးတဈခုပါပဲ။
အစညျးအဝေးထိုငျတဲ့အခါမြိုးမှာ တဈဖကျသူပွောတာကို အလေးပေး နားထောငျပေးတတျခွငျး၊ မိမိအမွငျကို ရှငျးရှငျးအေးအေးပွောပွတတျခွငျး၊
ပွဿနာဖွဈတဲ့အခါမှာ စိတျအေးအေးနဲ့ ပွဿနာအရငျးမွဈကို ရှာပွီး ပွောပွတတျခွငျး၊ မိမိ အဖှဲ့သားအပျေါ Feedback (ထငျမွငျခကျြ) ပေးခွငျး စတဲ့ Communication Skill တှကေို လလေ့ာထားသငျ့ပါတယျ။
ဘယျလိုပွောရမလဲ – အရငျဆုံး နားထောငျတတျအောငျ လကေ့ငျြ့ပါ။ ကိုယျပွောခငျြတာကို စှတျပွောခလြိုကျတာမြိုး မဟုတျဘဲ တဈဘကျလူမှာ ဘယျလို အကွောငျးပွခကျြတှေ ရှိနမေလဲ၊
ဘာကွောငျ့လဲ၊ သူ့မှာ ဘာပွောစရာတှေ ရှိနမေလဲ ဆိုတာမြိုးကို အရငျနားထောငျတတျပါစေ။ နောကျတဈဆငျ့ စိတျအေးအေး ထားတတျအောငျ လကေ့ငျြ့ပါ။
တဈခုခုဆို သှေးပူပွီး ဆုံးဖွတျခကျြကို အလောတကွီးခလြိုကျတာမြိုးထကျ ခေါငျးအေးအေးနဲ့ စဉျးစားပွီး ဘကျမြှတှေးတတျအောငျ လကေ့ငျြ့ပါ။
အပျေါယံတငျလေး မကွညျ့ဘဲ တကယျ့ ပွဿနာရဲ့ အတှငျးကကြ အရငျးအမွဈကို ရှာတတျဖို့လညျး အကငျြ့လုပျယူပါ။ စကားပွောရာမှာလညျး လောပွီး ပွောတာမြိုး မဟုတျဘဲ အေးအေးဆေးဆေး ပွောတတျတဲ့ အကငျြ့ကို မှေးမွူပါ။
(၅) Technical Skills
ဒီနခေ့တျေမှာ အရာအားလုံးက နညျးပညာနဲ့ တျောတျောမြားမြား သကျဆိုငျလာတာမို့ ကိုယျခေါငျးဆောငျရမယျ့ သကျဆိုငျရာ နယျပယျနဲ့ ပတျသကျတဲ့ နညျးပညာ မှနျသမြှကို အနညျးဆုံး အကွမျးဖဉျြးလောကျတော့ တီးမိခေါကျမိရှိနရေပါမယျ။ အသေးစိတျ ကြှမျးရငျတော့ ပိုကောငျးတာပေါ့နျော။
ဘယျလို သငျယူမလဲ – ဒါကတော့ အလုပျကသငျသှားမယျလို့ပဲ ဆိုရမလို ကိုယျ့ရဲ့ ကွိုးစားမှုကလညျး လိုပါသေးတယျ။
တခြို့အလုပျခှငျတှမှောတော့ လုပျငနျးခှငျအတှကျ လိုအပျတဲ့ အရညျအသှေးတှေ ပွညျ့လာအောငျ သငျပေးတာမြိုး ရှိတတျပါတယျ။ တခြို့လုပျငနျးတှမှောတော့ သငျပေးဖို့ မရှိဘဲ အရညျအသှေးပွညျ့နသေူတှကေိုသာ ရှေးခယျြတတျတာမို့ ကိုယျ့ဘကျက ကွိုတငျပွီး အရညျအသှေးပွညျ့နတောသာ အကောငျးဆုံးပါ။
ဒီတော့ ကိုယျက ဘယျလုပျငနျးခှငျထဲမှာ ရှိနတောလဲ? ဘယျလို အလုပျမြိုးကို လုပျခငျြတာလဲ ဆိုတဲ့ပျေါ မူတညျပွီး လိုအပျတဲ့ သငျတနျးတှေ တကျတာမြိုး လုပျထားပါ။
အလအေ့ကငျြ့ မပွတျပါစနေဲ့ဦး။ သငျတနျးတှေ တကျပွီး ဆာတီဖီကိတျရတာနဲ့ ဆကျမလကေ့ငျြ့တော့ဘူးဆိုလညျး အလကားပါပဲ။
လုပျငနျးခှငျထဲမှာ ကိုယျ့ရဲ့ အရညျအခငျြးတှကေို ထုတျသုံးနိုငျဖို့က အရေးအကွီးဆုံး မဟုတျလား။
ကဲ ကိုယျ့ကိုယျကို ငယျတယျဆိုပွီး comfort zone မှာ မနနေဲ့တော့နျော။ ထကျမွကျထူးခြှနျတဲ့ လူငယျခေါငျးဆောငျကောငျးတဈယောကျဖွဈအောငျ အခုကတညျးက ကွိုတငျကွိုးစားကွဖို့ တိုကျတှနျးခငျြပါတယျ။
Ref : Myat(for Her Myanmar)
ထက်မြက်ထူးချွန်တဲ့ လူငယ်ခေါင်းဆောင်ကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်အောင် ဘာလိုskill တွေလိုအပ်သလဲ
အသက်၂၀ ကျော် လာပြီဆိုတာနဲ့ တချို့ကလည်း ဘွဲ့ရ၊တချို့ကလည်း၊ လုပ်ငန်းခွင်တွေဝင်နေကြပါပြီ။ ဘွဲ့ရတဲ့ လူငယ်တွေ အတွက်ကလည်း ဘဝရဲ့အချိုးကွေ့တစ်ခုလိုပါပဲ။ ဘွဲ့ရပြီးတာနဲ့ ကိုယ်ရဲ့ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအလုပ်ကို ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ရွေးချကြရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်လုပ်ငန်းခွင်ကိုပဲဝင်ဝင် လူငယ်တွေ အနေနဲ့ မဖြစ်မနေရှိသင့်တဲ့ အရည်အချင်း အချို့ကိုဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်.....
ကိုယ်မသိတဲ့ သူစိမ်းတွေနဲ့ မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းဖွဲ့ရတယ်ဆိုတာ မလွယ်လှပါဘူး။ လူတော်တော်များများ တွန့်ဆုတ်တတ်ကြပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းဖွဲ့ခြင်းဆိုတာဟာ အောင်မြင်တဲ့သူတစ်ယောက် ဖြစ်စေတဲ့ အရည်အချင်းထဲ ပါနေပါတယ်။
ဒါကြောင့် သူများနဲ့မတူ အောင်မြင်ချင်တယ်ဆိုရင် ကြောက်ရွံ့နေတဲ့ လူများစုထဲ ကိုယ်မပါပါစေနဲ့တော့။
ဘယ်လိုကြိုးစားရမလဲ – အခုချိန်ကစပြီး ဖြစ်နိုင်သမျှ လူအားလုံးနဲ့ အပေါင်းအသင်းဖွဲ့ပါ။ အပေါင်းအသင်းများလာသလောက် အခွင့်အလမ်းတွေလည်း ပိုများလာပြီး မျက်စိ၊ နား ပိုပွင့်လာပါလိမ့်မယ်။
လူအများရှေ့မှာ စကားပြောရဖို့ကို လူအများစု ကြောက်ရွံ့တတ်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အောင်မြင်နေတဲ့သူတွေကတော့ ဘယ်တော့မှ မကြောက်ရွံ့ပါဘူး။
သူတို့ပေးချင်တဲ့ မက်ဆေ့ခ်ျ သူတို့မျှဝေချင်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို အကြောက်တရားမရှိ တည်တည်ငြိမ်ငြိမ် presentation လုပ်နိုင်ကြပါတယ်။
လူအများရှေ့ စကားရဲရဲပြောရဲတာဟာ sales ရောင်းတဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ကိုယ့်ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းတိုးတက်မှုအတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ မီတင်မှာပဲဖြစ်ဖြစ် အထောက်အကူဖြစ်စေပါတယ်။
ပြောရဲအောင် ဘယ်လိုလေ့ကျင့်မလဲ – ကဲအခုချိန်ကစပြီး လူတွေရှေ့မှာ များများလေ့ကျင့်ပါ။ အိမ်မှာဆို မှန်ကြည့်ရင်း စကားပြောလေ့ကျင့်ပါ။
ကိုယ့်မျက်နှာကို မှန်ထဲမြင်နေရတာမို့ ကိုယ့်ကို သူများက ကြည့်နေသလိုခံစားရတော့ လူတွေအများကြီးရှေ့ရောက်လည်း တည်တည်ငြိမ်ငြိမ် ပြောနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
ကြောက်စိတ်ကို ကျော်လွှားဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းက ကိုယ်ကြောက်တဲ့အရာတွေကို ပုံမှန်ထက် (၂) ဆ ပိုလေ့ကျင့်ပေးခြင်းပါပဲ။
အခုခေတ်မှာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း တစ်ခုနဲ့ တစ်ခုပဲဖြစ်ဖြစ် ဋ္ဌာနအချင်းချင်းပဲဖြစ်ဖြစ် အီးမေးလ်ပို့တဲ့အခါ အင်္ဂလိပ်လိုပဲ ပို့ကြတာမို့ စီးပွားရေးသုံး အင်္ဂလိပ်စာဟာလည်း တတ်ထားသင့်တဲ့ အရည်အချင်းတစ်ခုထဲမှာ ပါဝင်နေပါတယ်။
ကိုယ်က အီးမေးလ်ကို ချက်ကျလက်ကျ ပို့တတ်ခြင်းဟာလည်း အောင်မြင်တဲ့ သူတစ်ယောက်မှာရှိသင့်တဲ့ အရည်အချင်းပါပဲ။
ဘယ်လိုအရေးကျင့်မလဲ – ဒါကျတော့ အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာတာနဲ့ နည်းနည်းဆိုင်သွားပါပြီ။ လုပ်ငန်းခွင်ထဲ ရောက်နေပြီဆိုရင် ကိုယ့်လုပ်ငန်းအတွက် သင့်လျော်မယ့် အင်္ဂလိပ်စာ ရေးသားနည်း၊
အီးမေးလ်ကို ပရော်ဖက်ရှင်နယ်လ်ကျကျသုံးနည်း စတာတွေကိုလည်း စနစ်တကျ လေ့လာထားဖို့ လိုလာပါပြီ။ ဒီလိုလေ့လာတဲ့အခါ လုပ်ငန်းခွင်သုံး အရေးအသားတွေကို
သီးသန့်သင်ကြားပေးတဲ့ သင်တန်းတွေရှိသလို ကိုယ်တိုင်လည်း လေ့လာလို့ရပါတယ်။
(၄) Communication ပေါင်းသင်းဆက်ဆံတတ်ခြင်း)
ကိုယ့်အဖွဲ့သားတွေနဲ့ Communicate (ပြောဆိုဆက်ဆံ) တဲ့အခါမှာ မှန်ကန်တဲ့နည်းလမ်းနဲ့ ပြောတတ်ဖို့ကလည်း ခေါင်းဆောင်ကောင်းတစ်ယောက်မှာ ရှိသင့်တဲ့အရည်အချင်းတစ်ခုပါပဲ။
အစည်းအဝေးထိုင်တဲ့အခါမျိုးမှာ တစ်ဖက်သူပြောတာကို အလေးပေး နားထောင်ပေးတတ်ခြင်း၊ မိမိအမြင်ကို ရှင်းရှင်းအေးအေးပြောပြတတ်ခြင်း၊
ပြဿနာဖြစ်တဲ့အခါမှာ စိတ်အေးအေးနဲ့ ပြဿနာအရင်းမြစ်ကို ရှာပြီး ပြောပြတတ်ခြင်း၊ မိမိ အဖွဲ့သားအပေါ် Feedback (ထင်မြင်ချက်) ပေးခြင်း စတဲ့ Communication Skill တွေကို လေ့လာထားသင့်ပါတယ်။
ဘယ်လိုပြောရမလဲ – အရင်ဆုံး နားထောင်တတ်အောင် လေ့ကျင့်ပါ။ ကိုယ်ပြောချင်တာကို စွတ်ပြောချလိုက်တာမျိုး မဟုတ်ဘဲ တစ်ဘက်လူမှာ ဘယ်လို အကြောင်းပြချက်တွေ ရှိနေမလဲ၊
ဘာကြောင့်လဲ၊ သူ့မှာ ဘာပြောစရာတွေ ရှိနေမလဲ ဆိုတာမျိုးကို အရင်နားထောင်တတ်ပါစေ။ နောက်တစ်ဆင့် စိတ်အေးအေး ထားတတ်အောင် လေ့ကျင့်ပါ။
တစ်ခုခုဆို သွေးပူပြီး ဆုံးဖြတ်ချက်ကို အလောတကြီးချလိုက်တာမျိုးထက် ခေါင်းအေးအေးနဲ့ စဉ်းစားပြီး ဘက်မျှတွေးတတ်အောင် လေ့ကျင့်ပါ။
အပေါ်ယံတင်လေး မကြည့်ဘဲ တကယ့် ပြဿနာရဲ့ အတွင်းကျကျ အရင်းအမြစ်ကို ရှာတတ်ဖို့လည်း အကျင့်လုပ်ယူပါ။ စကားပြောရာမှာလည်း လောပြီး ပြောတာမျိုး မဟုတ်ဘဲ အေးအေးဆေးဆေး ပြောတတ်တဲ့ အကျင့်ကို မွေးမြူပါ။
ဒီနေ့ခေတ်မှာ အရာအားလုံးက နည်းပညာနဲ့ တော်တော်များများ သက်ဆိုင်လာတာမို့ ကိုယ်ခေါင်းဆောင်ရမယ့် သက်ဆိုင်ရာ နယ်ပယ်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ နည်းပညာ မှန်သမျှကို အနည်းဆုံး အကြမ်းဖျဉ်းလောက်တော့ တီးမိခေါက်မိရှိနေရပါမယ်။ အသေးစိတ် ကျွမ်းရင်တော့ ပိုကောင်းတာပေါ့နော်။
ဘယ်လို သင်ယူမလဲ – ဒါကတော့ အလုပ်ကသင်သွားမယ်လို့ပဲ ဆိုရမလို ကိုယ့်ရဲ့ ကြိုးစားမှုကလည်း လိုပါသေးတယ်။
တချို့အလုပ်ခွင်တွေမှာတော့ လုပ်ငန်းခွင်အတွက် လိုအပ်တဲ့ အရည်အသွေးတွေ ပြည့်လာအောင် သင်ပေးတာမျိုး ရှိတတ်ပါတယ်။ တချို့လုပ်ငန်းတွေမှာတော့ သင်ပေးဖို့ မရှိဘဲ အရည်အသွေးပြည့်နေသူတွေကိုသာ ရွေးချယ်တတ်တာမို့ ကိုယ့်ဘက်က ကြိုတင်ပြီး အရည်အသွေးပြည့်နေတာသာ အကောင်းဆုံးပါ။
ဒီတော့ ကိုယ်က ဘယ်လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာ ရှိနေတာလဲ? ဘယ်လို အလုပ်မျိုးကို လုပ်ချင်တာလဲ ဆိုတဲ့ပေါ် မူတည်ပြီး လိုအပ်တဲ့ သင်တန်းတွေ တက်တာမျိုး လုပ်ထားပါ။
အလေ့အကျင့် မပြတ်ပါစေနဲ့ဦး။ သင်တန်းတွေ တက်ပြီး ဆာတီဖီကိတ်ရတာနဲ့ ဆက်မလေ့ကျင့်တော့ဘူးဆိုလည်း အလကားပါပဲ။
လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာ ကိုယ့်ရဲ့ အရည်အချင်းတွေကို ထုတ်သုံးနိုင်ဖို့က အရေးအကြီးဆုံး မဟုတ်လား။
ကဲ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ငယ်တယ်ဆိုပြီး comfort zone မှာ မနေနဲ့တော့နော်။ ထက်မြက်ထူးချွန်တဲ့ လူငယ်ခေါင်းဆောင်ကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်အောင် အခုကတည်းက ကြိုတင်ကြိုးစားကြဖို့ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။
ဘာသာစကားအစုံ နှငျ့ soft skill အတှကျ သိထားသငျ့အခကျြမြားကို အခမဲ့ လလေ့ာကွမယျ
"လူငယ်တွေ လုပ်ငန်းခွင်ဝင်တဲ့ အခါ မဖြစ်မနေရှိသင့်တဲ့ Soft Skill (၈) ခု"